CNIHD : Tsy ekena ny fanamparam-pahefana -
AccueilSongandinaCNIHD : Tsy ekena ny fanamparam-pahefana
CNIHD : Tsy ekena ny fanamparam-pahefana
Fanamparam-pahefana tanteraka no handikana ny zava-nitranga teny Antanimena ny sabotsy lasa teo, hoy ny CNIDH na ny kaomisionina nasionaly mahaleo tena momba ny zon’olombelona , n’inona n’inona antony nahatonga ny ady. Ny fahitana basy nampiasain’ ireo namono olona iray, tamin’ ny horonan-tsary mifamezivezy eraka ny tambanjotra sosialy dia manamarina tsara, fa nanana ny fahefana ireo telolahy ka tsy afa- nanohitra ilay voakasi-tanana. Manameloka iny fihetsika iny noho izany ny CINDH, ary tokony horaisina ny fepetra sy sazy mifandraika amin’ izany.
Mazava fa fanamparam-pahefana ity nataon’ ny zanaky ny talen’ny fiarovana ny primatiora teo aloha ity, sy ny mpiambina iray izay mbola marihina fa avy amin’ ny MAPAR, ny praiminisitra. Fahefana izay mbola tsy am-pelatanan’izy ireo akory izany dia indro fa nampiasainy sahady, izay midika fa hisy ny loza mitatao raha ho lany eo ny kandidan’izy ireo. Azo handikana fa hery famoretana ny fihetsika feno herisetra sy habibiana tahaka iny zava-nitranga teny Analakely iny, ka mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tsy hampiasain’izy ireo ve izany raha azony ny fitondrana.
Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana tahaka ny fakana an-keriny amin’ izao fotoana izao, dia nanambara ny CINDH fa marefo ny fanjakana ary tahaka ny tsy misy. Toa samy manao izay tiany ny tsirairay, ary tsy matahotra lalàna intsony ireo jiolahy. Nisesisesy ny fakana an-keriny, ary manginy fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana, izay fahavalom-bahoaka hoy ity kaomisiona nasionaly mahaleo tena momba ny zon’olombelona ity. Noho izany dia tokony handray ny andraikiny manandrify azy ireo izany, satria filaminana sy fandriam-pahalemana no tadiavin’ ny vahoaka malagasy nampindrana fahefana.
“Eo anilan’ny vahoaka mandrakariva”. Izay rahateo ny fanambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Araka izany, tsy nitsahatra nitety faritra maro manerana ny Nosy ny Filohan’ny Repoblika taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo. Taorian’ny fandalovany tany Antalaha, Maroantsetra ary Ambohitsilaozana ...Tohiny